Umhla My Pet » 12 Ukutyhutyha Smart ukuze Ukuthandana umxokozelo
ngokuthi Steve kamoto
ukubuyekezwa: Apr. 02 2020 | 5 min ukufunda
Ibalaselisa ulwando ngamaza Internet yenza kucace ukuba ukuthandana intanethi apha ukuze bahlale. Nabaziphetheyo ngendlela banamhlanje, uphuhlisa abaninzi kokufumanisa ukuba ukuthandana Intanethi zombini lula, zitshiphu, kwaye ixesha elininzi kunenkqubo ukuthandana zemveli.
Njengentshayelelo kule ndlela intsha ukuthandana, apha ezinye oshukunyiswa smart ukwenza ukuze senze amava akho kunomvuzo yaye ngaphantsi buhlungu:
1. Thabathani indlela bakhanyiselwa: Ndaqonda ukuba ukuthandana online nto nje uhlobo ezahlukeneyo intshayelelo. Nika itrayi ixesha elithile kwaye enze ukongeza isicwangciso yoluntu ngokubanzi. Musa ukwenza ukuthandana online indibaniselwano yakho kuphela besini esahlukileyo, kungenjalo uya ubonakale njengomntu ulilolo okanye lithemba. Ngeli lixe abafanelekileyo abagqatswa uthando becala amanani imidlalo (UMthetho kunomyinge), ndaqonda ukuba akukho azisebenzi bangaphi abantu ukuba imiba. Into ebalulekileyo kukuba ingaba ukho na umntu owenza.
2. MUSA ndikwenze konke ALONE: Yenza lo msebenzi mnandi umdla ngokubandakanywa umhlobo besenza oku ukuthandana ezintsa online kunye. Unako ukufunda ngokukhawuleza ngokuthelekisa amanqaku nokuxhuzu kwinkqubo kunye ngexesha elinye. Oku kuya kuthatha uxinzelelo kuwe, Ikwenza ubonakale ngaphantsi lithemba ukuba amadoda, kwaye abe nokhuseleko ngokuchasene weirdo abaya ukuze ihleli apho phandle ekhangela loners amanye.
3. Qala Fresh uhlale Fresh: Musa angaphathi impahla ngokweemvakalelo kungena ezintsa olutsha. Oko kuthetha ukuba kufuneka kuphelisa naluphi na utyekelo ukukhalaza, kundigweba, ukugxeka, okanye bagxeke ukuthandana, romance, uthando, okanye besini esahlukileyo. isimo sakho uba indlela ongabonakaliyo ukuba babe nesimilo omkhulu wokuqala entsha uthando ithemba. Ukuthandana online, unalo ithuba elikhethekileyo ukwazi omnye umntu ngaphandle ebona okanye dibana nabo kuqala. Yenza ibengezela sakho sengqondo kanye njengoko Ndingathanda uncumo kangangoko unako ukuyenza ubuso-ngobuso intlanganiso.
4. Khetha KAKUHLE IIFIZI THANDANA SITE: Sebenzisa iindawo umvuzo yimpumelelo kakhulu. Ziphephe iintengiso zobuqu yamahala bavelelwa ngokuvelelwa elivisayo, abantu abatshatileyo, kunye nalo. Iindleko zenkqubo ubalulekile sokuhluza ngaphandle freeloaders. Unako ukongeza imizamo yakho nokufumana kumtyhi esekelwe umdla ingakumbi ukuba (DateMyPet.com ukuze izilwanyana) okanye luphawu eyodwa ukuba nilime (imvelaphi yobuhlanga, ezinkulu ubungakanani-).
5. Masi I AD IKOPI EFFECTIVE nefoto ENKULU: Yiba umhlobo abanetalente bhala inkcazelo kulungile kuni, ukuba bufutshane, elithozamisayo, kwaye anomtsalane. Musa ukukhupha iinkcukacha ezininzi kakhulu okanye inkcazelo yobuqu. Ukugcina njengesixhobo imfihlelo, kakhulu. Qiniseka ukuba unayo ifoto ogudileyo, ukuba bakutsha, wena wedwa, kwaye ngoncumo ngokomoya ebusweni bakho. Thatha iifoto isampula ezininzi kwaye khetha eyona. Ukuba kuyafuneka, kubandakanya iifoto eziliqela okanye uyitshintshe ngamaxesha. Musa uwajongele phantsi amandla umfanekiso. Khumbula umzekeliso Chinese olesayo: A umfanekiso ixabisa iwaka amazwi.
6. LANDELA ekhuselekileyo INTERNET THANDANA UMZEKELO: Ukubonis 3 mba kumntu ngamnye. Meet kwindawo kawonke ikofu kwi emaqanda iyure yonke. Ngaba into ezimiselwe koko (kudibana nomhlobo) ukuze awukwazi ochasiweyo ukuba ukuhlala ngeenxa elide kakhulu. Ukuba uziva ungakhululekanga, ukuzisa nomhlobo uxelele mntu uza ukuhlangabezana ukuba ithuba ibhonasi ukuhlangabezana abantu ababini endaweni enye. Ukuba ufumana le intshayelelo, koko uyakwazi ukuqhubeka onepateni ukuthandana eqhelekileyo, eshiya inxalenye Internet ngasemva undilibele.
7. GET esicace OKO awufuni: Ukususa wabakhupha abo boyisiweyo okanye abantu ezinokuba yingozi. Uthembe qatha yakho kwemo kunye nobukrelekrele yakho ibonwe. Ukuba umntu ebonakala wasemzini nangayiphi na indlela, qiniseka Kwathi ngaloo ithuba. Usenokuba ephosakeleyo lo mntu othile, kodwa uya kuba ikhuseleke kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ezinye imikhondo yokuziphatha engaqhelekanga ziquka: emails ezininzi kakhulu rhoqo, ulwimi engamanyala eye-, izimvo ukulawula, nomsindo ngokugqithisileyo, amacebo osazama, neemfihlo ezifihlakeleyo okanye izinto ezininzi ezibonakala ziphikisana.
8. Nazi ukuba yintoni na awufuni: Yiba ocace gca ukuba uthanda kwindawo ixesha elide iqabane uthando ngokwemiqathango entliziyweni, umlinganiswa, isimo, kwaye ngokuhambiselana. Khangela umntu eg iinjongo ubudlelwane, ubuntu iyavisisana, amaxabiso efanayo core, ibe ngumntu okulungeleyo yokuphila. Lumka ekuqaleni ukuze ukususa ababi, kodwa ngokukhawuleza ukukhangela izinto ezintle ukuba awufuni kubudlelwane uthando. Oya kugcina HIV wena ndikwenze ube nomtsalane kwabanye.
9. MUSA SPOOK bemke LWABASAQALAYO: Ukuba ufumana umntu anako sisihle umntu aphephe uthando iqabane kungcungcuthekisa bemke ngokubuza imibuzo emininzi kakhulu, kokubuza mkela imibuzo, amxokayo iimpawu, ukubonakala abasweleyo kakhulu, ukuba akukho namanye amaziko asekuhlaleni, abahlobo, okanye amasoka ezinokwenzeka. Ukuthetha ngokukhululekileyo ngezinto abanokuzenza zakho, kodwa akukho mfuneko yokuba ahlale okanye kugxininisa kubuthathaka bakho. Makhe flow iinkcukacha ngesantya eqhelekileyo njengoko Ngokuzenzekelayo bubonakaliswa intsebenziswano. Musa kuwela kumgibe kokubuza okanye achaze ulwazi kakhulu ngokukhawuleza kakhulu.
10. MUSA kakubi, YIBA NGUWE: Ngasemva yesiphelo computer umntu kuba mnandi, ongatshatanga, yimpumelelo, tyebile, kwaye bonke emangalisayo kunye, kodwa eneneni sabo kakhulu eyahlukileyo. Musani ukuba abanye abasebenzisa iifoto ezindala ngokwabo kwaye babhale profiles ngokubaxwa malunga ngokwabo. Nyaniseka uze emva koko ucele namathemba zakho ngendlela echuliweyo ukunyaniseka kakhulu. Ukuba akukho na ukunyaniseka, akukho akanakuba nakweyiphi na itrasti nokuba. Ukuba akukho ndlela ukuqala naluphi na uhlobo lolwalamano uthando ixesha elide.
11. Singaphumla ukutshaja KUNYE ahlolisise: ukuthandana ngekhompyutha ukunxiba uhle ukuba akulumkanga. Kwakhona kukwenza ngaphantsi kwabantu enyemba ngakumbi ukuthandana nabantu besini esahlukileyo. Yiloo nto sicebisa ukuba ungena kuphela 3 ngenyanga yobulungu inkonzo ukuthandana online ekuqaleni. emva kokuba 3 kweenyanga ophezu, bathathe ikhefu yaye ukuhlola impumelelo kunye nokusilela. Mhlawumbi kufuneka utshintshe ikopi yakho ad okanye ifoto yakho. Kanye umlobi osisilumko, mhlawumbi kufuneka utshintshe ithiyelwe wakho ngenxa kuni ngathi ukuba uhlobo izidalwa ukuba ekutsaleni. Mhlawumbi lixesha ukuzama kwenye indawo ukuze ubone ukuba nomtsalane ngohlobo olwahlukileyo lomntu. Kodwa uninzi zonke, bathathe ikhefu kuya kukunceda kwakhona imbono yakho ukuze ukungena yakho elandelayo ibe ukuthandana online uya kuba nethemba nezilungileyo.
12. Wonwabe okanye engakwenzi KUZO ZONKE: Yenza lo msebenzi fun okanye musa inxaxheba kuwo onke. Kuthe nje uba mbambano, lamanxuwa self-esteem, okanye uvakalelwa ngathi kungumsebenzi ekhathazekile, ndiyeke ukwenza oko ukugxininisa into ebomini bakho. ukuthandana Internet kuba yimpumelelo kubantu abaninzi kodwa kuxhomekeke ekwenzeni oshukunyiswa smart, nokugcina sengqondo olukhulu, ukuba nomonde lukhuni, yaye ukulungele ngokwasemoyeni xa ekugqibeleni luck ngapho.
ukuthandana intanethi nto ngaphezu indlela entsha yokwenza intshayelelo. Yenza kuphela oshukunyiswa smart kwaye siphephe izidenge ukuze uzigcine kwi umendo ukuba umthande. Ngeke wazi ukuba ongakuwe nguye kuni. Kwaye kumdlalo uthando, kuthabatha kuphela ukuba babe ziintshatsheli ubomi. luck ukonwabela uhambo lwakho kakuhle kwaye!